डा. समीर, जसले आफ्नै रगत निकालेर रातको दुई बजे सुत्केरीको अपरेसन गरे - - Arghakhanchi Saptahik
Home Slider समाचार स्वास्थ्य डा. समीर, जसले आफ्नै रगत निकालेर रातको दुई बजे सुत्केरीको अपरेसन गरे -
डा. समीर, जसले आफ्नै रगत निकालेर रातको दुई बजे सुत्केरीको अपरेसन गरे -
Slider , समाचार , स्वास्थ्य
काठमाडौं । गत कात्तिक ३० गते जिल्ला अस्पताल प्यूठानमा कार्यरत डा. समीर लामाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा एउटा सन्देश लेखे — जीवन बचाउने उत्कट इच्छाले मानिसलाई अलौकिक शक्ति दिने रहेछ । आफैंले एक पिन्ट रगत दिएर दुई घण्टा अपरेसन गरियो । रातको २ः१० बजे भएको थियो अपरेसन ।
लामाले सरिताको उपचारमा सघाउन काठमाडौंमै केही स्वयंसेवकहरू पनि खडा गरेका थिए । ती सबै स्वयंसेवक उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा गरेको आह्वानबाट प्रभावित भएर आफैं आएका थिए किनकि लामालाई थाहा छ गाउँबाट उपचार गर्न आउने सामान्य मान्छे काठमाडौंका अस्पतालमै हराउन सक्छ । आफूले पहिले नै काम गरेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि कुराकानी गरेर सरिताको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
अवस्था हेरेर आफूले जागिरे जीवनसँगै सहयोगको जीवन पनि अघि बढाइरहेको उनी बताउँछन् । आफैंले गरिरहेको काममा अलिकति जोखिम लिँदा कसैको जीवनमा सुखद परिवर्तन हुन्छ भने त्यहाँ धेरथोर मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने धारणा छ लामाको । तर आजभोलि भइरहने अस्पताल तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथिको दुर्व्यवहार जस्ता घटनाले केही असहज हुने उनी बताउँछन् । ‘जटिलता भएको बिरामीलाई सकेसम्म विशेषज्ञ डाक्टर र सुविधासम्पन्न ठाउँमा रेफर गरौं भन्ने मेरो चाहना हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ सामान्य अपरेसनपछि उनीहरू बाँच्ने अवस्था हुन्छ, तर जिल्लामा त्यो सम्भव हुँदैन ।’
लामाले प्यूठान पुगेर यस्तो प्रकृतिका १० जना बिरामीलाई सहयोग गरेको बताउँछन् । ‘मैले टिचिङमै काम गर्दा पनि यस्ता बिरामीहरूलाई सहयोग गर्ने गर्थें,’ उनी भन्छन्, ‘प्यूठानका बिरामीलाई एक हजारदेखि ६७ हजारसम्मको रकम जुटाएको छु ।’ उनी यसरी सहयोग गर्न पाउँदा साह्रै सन्तुष्टि मिल्ने बताउँछन् । तर देशको सारा संयन्त्र पंगु भएकोमा गुनासो भने पोख्छन् ।
देशका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू कहिल्यैपनि बिरामीमैत्री नभएको उनको भनाइ छ । अझ नबुझ्ने, विपन्न र ग्रामीण क्षेत्रका बिरामी भएमा त अस्पतालमा झन् ठूलो समस्या हुने बताउँछन् । यसरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयन नभएको उनको बुझाइ छ । सामान्य खर्च अभावमा बिरामीहरूको मृत्यु भइरहेको छ, उनको चाहना पूरा भइरहेको छैन ।
निजी अस्पतालहरू मूलतः नाफामुखी हुने भएकोले सरकारी अस्पतालहरूको सेवा प्रवाहलाई सुधार्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
सरकारी अस्पतालहरूको स्तर र सेवालाई सुधारेर सबै स्तरका बिरामीलाई चित्तबुझ्दो बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार निजी अस्पतालहरूमा पैसा कमाउनकै लागि आवश्यकता नभएका उपचार तथा टेस्टहरू गरिन्छ । यस्ता गतिविधिहरू रोक्नका लागि मेडिकल काउन्सिल र सरकारले नै ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘नेपालमा अहिले क्षयरोगको औषधी निःशुल्क बाँडिएपनि नागरिकको दैनिकी नबदलिएसम्म सो रोकको निराकरण हुँदैन,’ उनले भने, ‘खोक्दा मुख छोप्ने, सरसफाईमा ध्यान दिने कुरा मुख्य विषय हो ।’ त्यसैले स्वस्थ जीवनका लागि जीवनस्तर बदलिनुपर्नेमा उनको जोड छ । लामाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा आफ्नै नाममा ४४३००१६०५०१० नम्बरको खाता खोलेर रकम संकलन गर्ने र बिरामीहरूलाई सहयोग गर्ने गरेको बताउँछन् । स्रोत- लोकान्तरबाट साभार